Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Hawaii waxay uga digeysaa dadka soo booqda waxyaabaha ku saabsan alaabta qorraxda la soo xasuusto
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Dalxiisayaasha Hawaii waxay ka digeen alaabooyinka la iska xasuusto ee qoraxda la soo xusuusto
Johnson & Johnson Consumer Inc. waxay si iskood ah u soo xasuusineysaa dhammaan shan khadad NEUTROGENA iyo AVEENO aerosol oo ah khadadka wax soo saarka qorraxda.
Isticmaalka muraayadaha qorraxda ayaa muhiim u ah caafimaadka bulshada iyo ka hortagga kansarka maqaarka.
Muraayadaha qorraxda ee dib loo soo xasuusto waxaa lagu duubay gasacadaha aerosol waxaana loo qaybiyey waddanka oo dhan.
Macaamiisha waa inay joojiyaan isticmaalka badeecooyinka ay waxyeelleeyeen oo iska tuuraan ama soo celiyaan.
The Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Hawaii (DOH) wuxuu ku baraarujinayaa dadka deegaanka iyo martida Johnson & Johnson Consumer Inc. (JJCI) waxay si ikhtiyaari ah u xasuusineysaa dhamaan shan khadad NEUTROGENA® iyo AVEENO® aerosol oo ah khadadka wax soo saarka qorraxda. Tijaabinta shirkadu waxay ku ogaatay heerar hoose oo benzene ah shaybaarrada qaar ka mid ah alaabta. Macaamiisha waa inay joojiyaan isticmaalka badeecooyinka ay waxyeelleeyeen oo iska tuuraan ama soo celiyaan.
Waxyaabaha la soo xasuusto waa kuwa lagu buufiyo muraayadaha qorraxda, gaar ahaan:
NEUTROGENA qorraxda qorraxda aerosol difaaca difaaca xeebta.
NEUTROGENA Cool Qalalan Sport qorraxda aerosol.
NEUTROGENA Dareenka qorraxda ee aerosol difaaca maalinlaha ah.
NEUTROGENA Ultra Sheer qorraxda aerosol aerosol.
AVEENO Ka ilaali + cusbooneysi qorraxda aerosol.
Muraayadaha qorraxda ee dib loo soo xasuusto waxaa lagu duubay gasacadaha aerosol waxaana loo qaybiyey waddanka oo dhan, oo ay ku jiraan Hawai'i, iyada oo loo sii marayo dukaamo kala duwan. Seddex ka mid ah muraayadaha qorraxda ee ay saameysey waxay ka kooban yihiin oxybenzone iyo / ama octinoxate, maaddooyinka laga mamnuucay iibinta ama u qaybinta Hawaii sida ku cad Qeybta 11-342D-21, Hawaii Reviised Statutes, oo dhaqan gashay bishii Janaayo 2021.
Benzene, kiimikada laga helo muraayadaha qorraxda ee ay saamaysay, waxay caan ku tahay deegaanka oo ay ka mid yihiin qiiqa baabuurta iyo qiiqa sigaarka, waxaana loo yaqaanaa inuu dadka u keeno kansar. Benzene ma aha qayb ka mid ah wax soo saarka qorraxda iyo heerarka benzene ee laga helo badeecadaha la soo celiyey way hooseeyeen. Iyada oo ku saleysan macluumaadka hadda jira, soo-gaadhista maalinlaha ah ee loo yaqaan 'benzene' ee alaabtan qorraxdu ka soo baxdo lama filayo in ay keento cawaaqib xumo caafimaad. Si kastaba ha noqotee, alaabooyinkan ayaa dib loo soo celinayaa si looga hortago soo-gaadhis dheeraad ah. JJCI waxay baareysaa sababta suurtagalka ah ee faddaraynta taasoo horseeday jiritaanka benzene ee alaabtooda.
Isticmaalka muraayadaha qorraxda ayaa muhiim u ah caafimaadka bulshada iyo ka hortagga kansarka maqaarka. Dadku waa inay sii wadaan inay qaadaan tallaabooyinka ku habboon ee qorraxda looga difaacayo oo ay ka mid yihiin isticmaalka maaddada loo yaqaan 'reef safescreens', oo maqaarka ku daboola dharka iyo koofiyadaha, iyo ka fogaanshaha qorraxda inta lagu jiro saacadaha ugu sarreeya
Macaamiisha ayaa la xiriiri kara Xarunta Daryeelka Macaamiisha ee JJCI 24/7 su'aalo ama weydiisanaya lacag celin iyagoo wacaya 1-800-458-1673. Macaamiisha waa inay la xiriiraan dhakhtarkooda ama daryeel caafimaad bixiyaha haddii ay qabaan wax su'aalo ah, walaac ah ama ay la soo kulmeen wax dhibaato ah oo la xidhiidha isticmaalka alaabooyinka qorraxda aerosol. JJCI sidoo kale waxay ogeysiinaysaa qeybiyayaasheeda iyo tafaariiqda warqad waxayna diyaarineysaa soo celinta dhamaan badeecadaha laxasuusto.